SomaliTalk.com » 2011 » January » 28
Home » Archive Maalinta January 28th, 2011
Shirkii Norway oo Digniin loogu diray DFKMG
iyo Magacyada dadkii ka qayb galay shirkaas…. Kulan looga hadlay arrimaha Soomaaliya, looguna magac daray “Kulanka Nabadda, Wadahadalka iyo La dagaalanka Xag-jirnimada” oo lagu qabtay magaalada Oslo ee dalka Norway 13-14kii Janaayo 2011 ayaa waxaa ka qayb galay dalalka loo yaqaan NORDIC (Norway, Denmark, Finland iyo Sweden). Qoraalkii lagu furay kulankaas ayaa xubnihii ka socdey DFKMG...
Furitaanka Dhismaha Cusub ee Masjidka A-Ixsaan ee Magaalada St.Paul, MN.
Waxaa dhamaan Muslimiinta ku nool labada magaalo ee mataanaha ah iyo nawaaxigooda lagu marti qaadayaa xafalada furitaanka ee Masjid Al-Ihsan. Oo ay kasoo qayb gali doonaan Culimo badab oo ka kala socota Masaajida ku yaala Magaalooyinka mataanaha. Sabti Janaayo 29, 2011 10:00am-7:00pm Fadlan fiiri Flayer-ka hoose. Read More →
Dalka Malaysia:- Buuq iyo dood ka taagan Maxkamadeynta Burcad-Badeed Soomaali ah!
Khamiis January 20, 2011 ayay aheyd markii Burcad-Badeed Soomaali ah kuna hubeeysan AK-47 ay afduubteen Markab lagu magacaabo MT Bunga Laurel balse Shaqaalaha Markabka ayaa Qaylo dhaan u dirsaday Markab dagaal oo ay dowladda Malaysia leedahay kuna sugan meel u dhow Xeebaha Soomaaliya kaasoo ugu danbeytnii soo bad-baadiyay Markabka iyo Shaqaalihii saarna iyadoo Dhaawac u geestay qaar ka mid ah Burcad-Badeeda...